[06 / 12 / 2019] DHMİ 2019 နှစ်နိုဝင်ဘာလေကြောင်း၊ ခရီးသည်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းအသွားအလာကိုကြေငြာခဲ့သည်	06 တူရကီ
[06 / 12 / 2019] တူရကီလေတပ်ယာဉ်အသွားအလာ၏ Center က Be မူမည်	06 တူရကီ
[06 / 12 / 2019] Istanbul Card Smart သည်အစ္စတန်ဘူလ်၏ဗဟိုတွင်ရှိလိမ့်မည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[06 / 12 / 2019] EminönüEyüpsultanAlibeyköyရထားလိုင်းသည် 2020 တွင်အဆုံးသတ်မည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[06 / 12 / 2019] အဆိုပါ Metrobus လိုင်းကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲများတွင်အမျိုးသမီးများလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းရေးရာ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
နေ့: အောက်တိုဘာလ 23 2019
Karabükသံနှင့်သံမဏိလုပ်ငန်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ (KARDEMIR)၊ လက်ရှိစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်စီမံမှုစနစ် (ERP) SAP R3, SAP S /4HANA စနစ်သည်ဒီဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းစီမံကိန်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် [ပို ... ]
ကျောင်းသားစာရင်းပေးသွင်းကဒ်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်မည်သည့်အခြေအနေများရှိပါသလဲ။ ဖြေ - Ankara Metropolitan မြူနီစီပယ်ကကျောင်းသားတွေအတွက် subscription card လျှောက်လွှာတင်တယ်။ 20 အောက်တိုဘာလမှအောက်တိုဘာလအထိ 2019 27 ဘော်ဒါကတ်များအောက်ရှိကျောင်းသားများ 200 [ပို ... ]
မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းအတွက် Goreme Valley အမျိုးသားဥယျာဉ်အခြေအနေကိုဖယ်ရှားထားပါသလား။
မြို့စီမံကိန်းများ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းဥက္ကဌ Orhan Sarıaltunနှင့်ဗိသုကာကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ Ankara ဌာနခွဲ၏ဥက္ကဌ Tezcan Karakuş Candan တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ Evrensel မှ Can Deniz Eraldemir အရ; [ပို ... ]
Mersin Metropolitan မြူနီစီပယ်, 73 ဘတ်စ်ကားမောင်းသူကြေညာချက်အပြီးတွင်အင်တာဗျူးများပြီးစီးခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း 1003 application များအနက် Metropolitan မြူနီစီပယ်သည်အမျိုးသမီးများအပါအဝင် 73 မောင်းသူကိုငှားရမ်းမည်ဖြစ်သည်။ Mersin ၏နိုင်ငံသားများ [ပို ... ]
Kocaeli တလျှောက်လုံးအများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များသည် 2009 နောက်ပိုင်း Kocaeli Metropolitan Municipality ၏အီလက်ထရောနစ်သေဆုံးသူစုဆောင်းခြင်းစနစ် (KentCard) စနစ်သို့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာသည်။ KentCard စနစ်သို့ကူးပြောင်းခြင်းဖြင့်ငွေချေးယူပါ [ပို ... ]
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Peace Sozen နှင့်အီရန်ခရီးသည်များသည်ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်နိုင်ငံခြားငွေပေါင်ထောင်ပေါင်းများစွာနှင့် TL ကိုပိုက်ဆံအိတ်ပိုင်ရှင်ထံပေးအပ်သည်။ အီရန်ခရီးသွား the ည့်သည်ကသူ၏အပြုသဘောဆောင်သည့်အပြုအမူအတွက်ယာဉ်မောင်းအားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Elsan A.Ş. မှထုတ်လုပ်သည့်မက်ထရိုယာဉ်များအတွက်ပထမဆုံးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသားစွမ်းအင်ထုတ်စက်
12 သဘောသဘာဝ "ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲမော်တာ", တူရကီ Elsen Inc ကိုအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးအသုံးပြုသောအထူးသဖြင့်ကြီးမားသောမြို့ကြီးတွေမှာအစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီ, Izmir, ကထုတ်လုပ်သည်။ လျှပ်စစ်မော်တာ၏တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်သူ EMTask [ပို ... ]
Istanbul မြို့ပြမြူနီစီပယ်မီးရထားစနစ် ဦး စီးဌာနမှူး Assoc ။ ဒေါက်တာ Pelin Alpkökinသည်Eskişehirရထားလမ်းစနစ်တွင်မြို့တော်ဝန်Büyükerşenနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် [ပို ... ]
စက်မှုနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီး Mustafa Varank မှပြောကြားခဲ့သည်။ olarak ၀ န်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Bursa ကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်နည်းပညာလှုပ်ရှားမှုများတွင်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Bursa, အရေးအပါဆုံးမြို့ကြီးများများ၏အခြေခံအဆောက်အဦးများ, စက်မှုလုပ်ငန်းတဦးတည်းတူရကီအတွက်တန်ဖိုးကဆက်ပြောသည်ထုတ်လုပ်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ " [ပို ... ]
စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Mustafa Varank, Oyak Renault က, တူရကီအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အလူမီနီယံအင်ဂျင်လုပ်ကွက်, အမြင့်ဖိအား Injection ကိုလူမီနီယမ်စက်ရုံအတွက်ထုတ်လုပ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်, "ဒီစက်ရုံ, Renault ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုနှင့်ဥရောပထဲမှာသာမျိုးစပ်အင်ဂျင်ကို [ပို ... ]
ပုဂ္ဂလိကစက်မှုဇုန်အသစ်များအား 330 ဒေါ်လာသန်းချီသုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက်လက်ရှိအကောင့်လိုငွေပြမှု
စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီး Mustafa Varank က Asil Çelikနှင့် Gemlik မြေသြဇာစက်ရုံများကို Bursa တွင်တည်ထောင်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ [ပို ... ]
ရုရှားမီးရထားလမ်းများမှ Belgrade Vrbnica မီးရထားကိုအဆင့်မြှင့်တင်မည်
ရုရှားမီးရထားနှင့်ဆားဘီးယားသည်ဘီဂရိတ် - Vrbnica - နယ်စပ်မီးရထားလမ်းကိုခေတ်မီစေရန်စီမံကိန်းကိုပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရန် Montenegro (ဘား) နှင့်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ရုရှားမီးရထား၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် [ပို ... ]
တူရကီရဲ့စီးပွားရေးကိုသင်္ဘော၏ bridge ပစ်နှင့်ဇန်နဝါရီလ-စက်တင်ဘာလကာလကနေဆင်းသက်လာဝင်ငွေ 1 ဘီလီယံအထိအဝေးပြေးလမ်းမသန်း 434 504 391 တထောင်ပေါင်ဖြစ်ခဲ့သည်ဖြစ်လာသည်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၏အချက်အလက်များအရ, Istanbul ရှိ 15 [ပို ... ]
Sapanca Cable ကားစီမံကိန်းဖျက်သိမ်းရေးအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းလှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့သည်
KırkpınarရှိHasanpaşaခရိုင်ရှိဆန့်ကျင်သူများသည် Sapanca သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အသနားခံစာစတင်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်နယ်အစီအစဉ်များနှင့်အလုပ်များခဲ့သော Teleferic စီမံကိန်းသည်အစီအစဉ်တွင်သူ၏နွေးထွေးမှုကိုထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။ ik ဖြစ်ရန်စီစဉ်ထားသည် [ပို ... ]
ဝန်ကြီး Turhan: 'Tbilisi ပိုးလမ်းဖိုရမ်သည်အရေးကြီးသောဆွေးနွေးပွဲဖြစ်သည်'
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Cahit Turhan၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်ဒုတိယ ၀ န်ကြီးချုပ် Elyar Ganiyev၊ [ပို ... ]
Ankara မြေအောက်ရထားရှိ X-Ray နှင့် Metal Door Detectors ဖြင့်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိလုံခြုံရေး
Ankara မြို့ပြမြူနီစီပယ်သည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ခရီးသည်လုံခြုံမှုကို ဦး စားပေးသည့်အစီအမံများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နေ့စဉ်ကင်မရာများမှစောင့်ကြည့်သောရထားစနစ်များ (ANKARAY နှင့် Metro Stations) ၏တံခါးပေါက်ရှိမြို့ပြမြူနီစီပယ်၊ X-Ray နှင့် Metal တံခါးများ [ပို ... ]
EKOL ၏ Intermodal သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပုံစံသည်ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မှုဆုကိုရရှိသည်
Ekol သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပုံစံအတွက်၎င်း၏ရေရှည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပုံစံအတွက်ဖွဲ့စည်းထားသော 2019 ရေရှည်တည်တံ့သောစီးပွားရေးဆုများမှကာဗွန်စီမံခန့်ခွဲမှုအမျိုးအစားတွင်ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ Sustainable Business Awards တွင် Ekol အားပညာရှင်များကရွေးချယ်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
ယနေ့သမိုင်းတွင် -7ဒီဇင်ဘာ 1884 Hejaz အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်တပ်မှူး
DHMİ 2019 နှစ်နိုဝင်ဘာလေကြောင်း၊ ခရီးသည်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းအသွားအလာကိုကြေငြာခဲ့သည်
အဆိုပါ Metrobus လိုင်းကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲများတွင်အမျိုးသမီးများလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းရေးရာ
CHP က Gurer ဝန်ကြီး Turhan အား TCDD Housing Loan ကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်
Vangölü Express စွန့်စားမှု၌မျှော်လင့်ခြင်းကြီးလှ၏!
Samsun အုပ်ချုပ်ရေးအစိမ်းရောင် Flash ဖော်ပြချက်
ENKA သည် Partner Bechtel နှင့်ဆားဘီးယားတွင်အဝေးပြေးလမ်းဖောက်မည်
OPET သည် Ultramarkets နှင့်လက်လီရောင်းချသောနေ့များတွင်ဖြစ်သည်
Otokoç6သည်6ဆုကိုအမျိုးအစားတွင်ရရှိသည်
Petrol Ofisi သည်ယာဉ်မောင်းသူများအနီးတွင်အမြဲတမ်းရှိသည်